Home News Isgoysyada Muqdisho oo Laga Qaaday Ciidamadi Ku Sugna + Qaraxyadi oo Kolki...
Isgoysyada Muqdisho oo Laga Qaaday Ciidamadi Ku Sugna + Qaraxyadi oo Kolki Hore lo Taag La’aa Hadase La Fududeeyay
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in la qaaday dhamaan ciidamada amaanka dowladda ee ku sugnaa Koontaroolada gaadiidka lagu baaro ee magalada Muqdisho.
Isgoysyada Ciidanka laga qaaday aya waxaa kamid aha Isgoysyada Siinaay, afarta-jardiin, Sanco, falaronsa, Howlwadaag, Bakaaro, kpp, Iyo Isgoyska Tarbuunka ee Muqdisho, isgoysyadaa oo ku wada teedsan waddada wadnaha ee muqdisho.
Ciidankan aya la shegay in gadiidka wax daabula ay u qaadayn xarunta weyn ee Sirdoonka Habar-khadiijo ee magaalada Muqdisho.
Lama oga sababta rasmiga ee ka danbeysa ciidamada dowladda ee maanta laga qaaday Koontaroolada gadiidka lagu baaro ee ku yaal wadada wadnaha ee magaalada muqdisho.
Waxa la is weydinaya sababta ka danbeysa iyadoo maal mahii ugu danbeeyay madaxda ugu sareysa dalka ay ku mashquul sanayeen khilaafka hareeyay hogaanka baarlamaanka oo ay dabada ka riixeyso xukuumada Soomaaliya ee uu hogaamiyo Xasan Cali Kheyre.
Shacabka ku dhaqan Muqdisho aya walaac xoogan ka muujinayeen amni darada magaalada oo shalay ay ugu danbeysay ay dhaceen laba qarax oo is miidaamin ahaa sidaasu ay tahay waxaa xirnaa wadooyinka mihiimka ee magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya.